Samsung na-aga na Galaxy S8 site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ ahịa ahịa | Gam akporosis
Nye Samsung a na-ahụ ya nke ukwuu ịnụ ọkụ n'obi na nke a bụ ọnọdụ dị oke mma na oke iwe ọ nwere ugbu a na Galaxy S8 ya, ọbụlagodi mgbe anyị nwere ozi gọọmentị, na ọ ga-eme atụmatụ ikesa ọtụtụ ngwaọrụ na mpaghara mbụ ahụ ọ ga-adị njikere ịgbasa na ụwa niile.
A ọhụrụ akụkọ si Korea na-ekwu na Samsung fọrọ nke nta ka okpukpu abụọ nke ahịa lekwasịrị tụnyere Samsung Galaxy S7. Koreanlọ ọrụ Korea lekwasịrị anya na nkeji iri isii, jiri ya tụnyere nde mmadụ 48 ahụ ezubere iche maka Galaxy S7. A dum nkwupụta nke ọdịmma na nke a na-azọrọ na e si na-enwe a ekwentị gị aka nke na-aga ịbụ oké ahịa ịga nke ọma.
Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, Samsung bụ etinye anụ niile na imi ihe maka Galaxy S8. Mgbe nhụjuanya ahụ tara ahụhụ na n'etiti oge ọkọchị na mgbụsị akwụkwọ na Galaxy Note 7, onye na-emepụta Korea chọrọ ịhapụ uto kachasị mma n'ọnụ gị mgbe ákwà mgbochi ahụ bilitere wee gosipụta nkọwa mbụ nke Galaxy S8 na ọnwa Machị.
The Galaxy S8 ga-abụ onye kachasị ere ahịa na ọ bụ etu Samsung siri were ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ nke ọnụ ọgụgụ ahịa ahụ maka afọ a nke ọkọlọtọ pụrụ iche. Anyị ga-enwekwa Galaxy Note 8 dị ka ozi kachasị ọhụrụ, mana nke mbụ nwere ike ịkwụsị uto uto ahụ na ndị ọrụ ha ga-abụ ọhụụ Galaxy S8 ọhụrụ.
Samsung agaghị anọ na Mobile World Congress 2017 n'ọnwa a, ọ bụ ezie na enwere atụmanya maka ihe ọ ga-eweta n'azụ ihe ngosi, mana a ga-atụ anya na mmemme March ga-adị ike. gbaa mmụọ nke ọtụtụ nde ndị ọrụ ga-eze ume na ihuenyo na o siri ike ọ bụla bezels, na anụ ahụ button na kpamkpam na ndị curved n'ọnụ n'akụkụ ga-adị mma karịa mgbe ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Samsung fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ nke ahịa ahịa maka Galaxy S8: 60 nde nkeji
Ngwa dị mkpa iji gee redio na World Radio Day